Author: Shakabei Kajilkree
Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha iyo hay’adaha. Waayidda Xubinimada Golaha Guurtida. Waxa malinti arbacad safarka ubaxay xubno katirsan ururka uu hogaminayo gudomiyaha ururka MOHA abdi- khaliq waxayna kaqabten hawlo badan mudadi 3bari ay kusugnayen deganka waxana ka xusi gadhnaa ; 1.
Horumarinta Cilmiga iyo Suugaanta Hiddaha iyo Dhaqanka. Haddii qabashada aftidu suuroobi waydo muddada loo xaddiday, waxa muddada ku meel gaadh ahaan loogu dhaqmayo Dastuurka kolba kordhin kara Baarlamaanka Guurtida iyo Wakiilada. Waxaan aad ugu mahad celinayna ilaah ka sukow Dhamaan shacabka ku nool xidda dal joog iyo dibad joogba Waxaana datuurka intan iyo inkabadanba waaan gaari doona inshallah Plz share By Yacmale.
Dib-u-dhigid fadhi wuxuu ku ansaxayaa aqiabyad fudud hal dheeri ; waxaana dib loo dhigi karaa ugu badnaan toddoba 7 maalmood. Xukuumaddu waa in ay dhiirri-gelisaa xeerna ka soo saartaa xaqa ay haweenku u leeyihiin in ay ka xoroobaan dhaqamada aan Shareecadda waafaqsanayn ee waxyeelada u leh jidhkooda iyo damurkooda.
Waa goob lagu fidiyo Diinta iyo hanuuninta ummadda dun iyo adduunyaba. Waajibaadka Muwaadinka iyo Ciqaabta Gudasho La’aanta. Bannaanaanshaha Xubinimada Guddida Culimada.
Haddii Golahu ka aqbalo istiqaalad. Waxa xubintu muddada dastuuriga ah hayn doontaa xilka bo magacaabay; isla markaana waayi doontaa xubinnimadii Golaha Wakiilada. Sidoo kale, marka xaalad ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad ay ku timaado Dastuhrka wuxuu Madaxweynuhu u magacaabayaa Madaxweyne-ku-xigeen xubin ka tirsan Golaha Wakiilada, oo 2da Gole oggolaadeen.
Most Related ELECTROMAGNETIC WAVES BY RK SHEVGAONKAR EBOOK
Xildhibaanada Puntland na waxay matalayaan shacab ilbax ah psntland ilaashanaya danahooda yaqaanana yoolkooda ay hiigsanayaan Kooxda Aaran Jaan na kama gadi karto Danayste Said Dani.
Musharaxa ayaa u balan qaaday bulshada inuu u hogaamin doono dhanaka uu horomarku ku jiro. Daryeelka Qaybaha Bulshada Baylahsan. Xiilli kasta waxa ku soo kordhaya tiro xubno sharaf ah oo kala ah: Haddii mid ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad ay ku timaado Madaxweynaha saddexda sano ee u xusub shanta sano ee xilka loo doortay, waxa Madaxweyne Ku-xigeenku noqonayaa Madaxweyne ku meel gaadh ah, waxaana Madaxweyne lagu dooranayaa muddo lix bilood gudohood ah. Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka.
Golaha Guurtidu waxa uu yeelanayaa Xoghaye aan xubin ka ahayn Golaha. Shuruudaha Qofka bo Dooranayo Golaha Guurtida. Ma bannaana in cuskb la qabto, la baadho ama la xayiro, haddii uusan markaa dembi faraha kula jirin, ama aanu amar qabasho oo sababaysan ku soo saarin Garsoore awood u lihi.
Uu jabo shardi ka mid ah shuruudihii lagu soo doortay; ama uu gudan waayo xilkiisa; 4. Ugu dambayn Ha ogaadaan Xildhibaanada sharaxta leh ee gobolada Bari iyo Nugaal in uusan Said Dani u ahayn Puntland iyo shacabkeeda tixgelintii ay ka mudnaayeen, maantana uusana istaahilin inay codkooda siiyaan.
Dangoroyo iyo maanta iyo soodhaweynta Madaxweyne asad osman loma kala harin Difaac iyo dowlad nimo shara and like. Fadlan ka qayb qaado hergelinta mashruuca isku wax u qabso ee lagu dhisayo cusbitaalka degaaanka xidda. Said Dani gobolka Mudug uma ahayn Puntland shalay, ha ogaadaan marka Xildhibaanada sharaxta leh ee vusub in uusan istaahilin inay codkooda siiyaan.
Federaalka iyo Faa’idooyinkiisa Federaalka oo ah is-maamul hoosaad uu deegaan pentlahd is maamulo isla markaana uu yeesho xeerar iyo nidaam hoosaad ay isku maamulaan kaas oo ay waajib tahay inuu waafaqo dastuurka iyo xeerarka kale uu qaranku lee yahay.
Qofku wuxuu xaq u leeyahay in la nabad galiyo jidhkiisa; ciqaabta jidhka iyo wax yeelo kasta oo loo geysto ddastuurka reebban tahay. Dambiyada laga gab xuquuqda qofka sida xasuuqa, di maxkamad la’aan ah, jidh dilka iyo wixii la mid ah malaha muddo dhaaf.
Most Related TDS2024B MANUAL PDF
Xuquuqda Qofka Xorriyadda laga qaaday.
Haddii ay Golayaashu diidaan mudanaha Madaxweynuhu u magacaabay Madaxweyne-ku-xigeenka, dasturuka waajib ku ah inuu mudane kale ku magacaabo muddo aan ka badnayn 30 maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa taariikhda diidmada Golayaasha. Dhismaha xoghaynta Golaha Guurtida waxay la mid tahay ta Golaha Wakiilada. Ka qayb-gelidda shirarka caalamiga ah, isagoo ka wakiil ah Jamhuuriyadda Somaliland. See more of Iftiin Organization on Facebook. Curinta, dhaafidda iyo wax ka beddelka cashuuraha iyo wixii takaaliif ah ee kale xeer ayaa jidaynaya.
Shacabka Puntland weey hadleen Dahal madhinan umaleyn asad for Puntlander. Guddoomlyaha degmadu, isagoo la tashaday wax garadka tuuladawaxa uu soo jeedinayaa guddida dastkurka ee tuullo, waxana ansixinaya Golaha Sharci dejinta ee degmada.
Soo-saaridda, Faafinta iyo Dhaqan-gelinta Xeerka. Golaha Wakiiladu waa xubno ka wakil ah dadweynaha; waana Qaybta laad ee Xeer-dejinta dalka, ansixinta xeerarka, pentlanx iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka.
Maxamadaha Degmooyinka; iyo 5. Inuu ka taliyo muran kasta oo Ia xidhiidha waafaqsanaanta Dastuurka. Xaqa Dacwadda iyo lsdifaaca.
Waa inuu Muslim yahay, kuna dhaqmaa Diinta lslaamka. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda.
Mohamed Said Farah Msf. Waxaana si fiicam noogu soo dhamaaday wajigii labaad ee dhir beerista. Tagida barnamujki solarka wajikisii labad tiradisu tahay 9 xabo waxayna katagen sharacyada magaaladda xidda 2. Waax waliba awoodda Dastuurku u gaar yeelay way u madax bannaan tahay.
Dawladdu waxay horumarinaysaa habka taakulaynta, caymiska iyo badbaadinta shaqaalaha waxaanay xoojinaysaa hay’adaha ku shaqada leh. Haddii Golayaasha Baarlamaanku fadhiyaan marka uu xeerarka degdegga ah soo saarayo Madaxweynuhu, waa inuu ugu gudbiyo muddo toddoba 7 maalmood gudahood ah si ay go’aanno uga gaadhaan.
Next story KADHALENUM SOLAIYILE NOVEL PDF
Previous story BIOGRAFI ADAM KHOO PDF